Isitudiyo sanamhlanje kwiziko laseVeria, kufutshane ne-Elia square - I-Airbnb
Isitudiyo sanamhlanje kwiziko laseVeria, kufutshane ne-Elia square
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgios
Isitudiyo esihlaziywe ngokupheleleyo ngokufudumeza kunye ne-air conditioning. Igumbi lokulala elivulekileyo kunye negumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Imi kumbindi weVeria, indawo kaElia. Kumgangatho we-mezzanine wesakhiwo esinamanyathelo ambalwa, alungele izibini kunye neentsapho ezinabantwana aba-1 okanye aba-2.
Isitudiyo esihlaziywe ngokupheleleyo ngokufudumeza kunye ne-air conditioning. Igumbi lokulala elinye kunye negumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Imi kumbindi weVeria, indawo kaElia. Ilungele izibini kunye neentsapho ezinomntwana omnye okanye ababini.
I-studio isebenza ngokupheleleyo, inazo zonke izixhobo zombane (ifriji, i-oven, amehlo ombane, umatshini we-frappe, i-toaster, umenzi wekhofi, i-kettle yombane yamanzi kunye nekhofi, izitya zasekhitshini, isomisi seenwele, isinyithi). Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukulungiselela ukutya.
Isimo somoya - Ukufudumala - Izinto eziyimfuneko - umabonakude - isikhangeli somsi - isicimi somlilo - Ikhithi yoncedo lokuqala - Amanzi ashushu - Isomisi seenwele - intsimbi
Iincwadi zabantwana, iincwadi zetafile, Ibhedi yomntwana kunye nesitulo esiphakamileyo ukuba siceliwe.
I-studio isebenza ngokupheleleyo, inazo zonke izixhobo zombane (ifriji, i-oven mini, i-kettle yombane, umatshini we-flipper, i-toaster, umenzi wekhofi, amanzi ombane kunye ne-coffee bar, izitya zasekhitshini, isomisi seenwele, isinyithi). Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngokutya.
I-Air-conditioning-Ukufudumala-Igumbi likaxakeka-i-TV-isixhobo sokujonga umsi-Isixhobo sokucima umlilo-Ikiti yoncedo lokuqala-Amanzi ashushu-Isixhobo sokuloba iinwele-Intsimbi
Iincwadi zabantwana, itafile, indawo yokudlala yabantwana kunye nesitulo xa iceliwe.
Intliziyo yeziko ibonakalisa lo mmelwane njengoko unokufumana yonke into apha. Ebumelwaneni kukho yonke into oyifunayo ukusuka kwiivenkile zokutyela kunye neekhefi, iivenkile ezinkulu, iibhaka-bhaka ukuya kwiivenkile zempahla. Kodwa kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane zokundwendwela ngemizuzu embalwa.
Intliziyo yeli ziko ibonakaliswe yile ngingqi njengoko yonke into ejikelezileyo ifumaneka apha. Elumelwaneni kukho iivenkile zokutyela kunye neekhefi, iivenkile ezinkulu, iibhaka kunye neevenkile zempahla. Kodwa izinto ezininzi ezinomtsalane zinokutyelelwa ngemizuzu nje embalwa.
Iindwendwe zizakufumana kum izitshixo zestudiyo, ndizozikhokela kulendawo ndibanike nenombolo yam yomnxeba ukuze ndibanike nanini na xa bendifuna. Ukugcinwa kwemithwalo kuvunyelwe ukulungiselela iindwendwe xa zifika kwangoko okanye zihamba emva kwexesha.
Ilayisensi okanye inombolo yobhaliso 544528
IsiGrike, isiNgesi, isiJamani
Ukutshaya kuya kunqweneleka ngakumbi kwifestile kunangaphakathi kwendlu.
Ayifanelekanga izilwanyana zasekhaya - kukho amanyathelo.
Ukutshaya, amatheko kunye neziganeko akuvumelekanga.
Ixesha lokufika lisemva ko-14:00 kwaye ukunduluka kude kube ngu-12.00.
Iindwendwe ziya kuthatha izitshixo zestudiyo kum, zibakhokele kwigumbi, kwaye ndibanike ifowuni yam ukuze ndibanike nanini na xa ndibafuna. Imithwalo ivumelekile ukuba iindwendwe zikhululeke xa zifika kwangethuba okanye xa zihamba emva kwexesha.
Ezingafanelekanga kwizilwanyana zasekhaya - kukho izitebhisi.
Akukho kutshaya, amatheko kunye neziganeko azivumelekanga.
Ixesha lokufika lisemva kwentsimbi ye-14:00 kwaye ukuhamba kude kube ngu-12.00.
Iindwendwe zizakufumana kum izitshixo zestudiyo, ndizozikhokela kulendawo ndibanike nenombolo yam yomnxeba ukuze ndibanike nanini na xa bendifuna. Ukugcinwa kwemithwalo kuvunyelwe…
Inombolo yomthetho: 00000544528
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$525
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Veria